Fitsarana: Hanangana fonja vaovao hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena
lundi, 22 juillet 2019 10:18
Nomarihina teny amin’ny Fitsarana Anosy - Antananarivo ny zoma 19 jolay ny ivon’ny fankalazana ny faha-60 taonan’ny fandraharahana ny fonja. « Fandraharahana ny fonja mivoatra : manaja ny zo mahaolona, antoky ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana » no lohahevitra nobanjinina nandritra izao fankalazana izao.
Hisy ny lamina vaovao izay hapetraka, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, handrindràna ny asa rehetra ary ny eo amin’ireo mpitsara sy mpandraharahan’ny fonja.
Hanangana fonja vaovao hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fanjakana, mba ho fanajana ny zo maha-olona, ho an’ireo voafonja, satria be loatra ny isan’izy ireo ka tsy mifanaraka amin’ny fotodrafitrasa misy eto amintsika.
Nankasitraka ireo ezaka efa vitan’ny ministeran’ny Fitsarana, izay mpiahy ny fandraharahana ny fonja, ny Lehiben’ny governemanta, anisan’izany ny fanatsarana ny sakafon’ireo voafonja, hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo. Mbola betsaka ny ezaka miandry, hoy ny praiminisitra, toy ny fampitaovana, ny fiara mitondra ireo voafonja mamonjy ny fitsarana azy, indrindra ny fitaovam-piadiana ho an’ireo mpandraharahan’ny fonja mba ho fitandroana ny filaminana.